अदालतअगाडि सिद्धबाबा पक्ष र महिला पक्षद्वारा नाराबाजी (तस्बिरहरू)
शनिबार, २९ जेठ, २०७८
मैदानमै लडेका एरिक्सन होसमा आए, थप उपचारका लागि अस्पताल लगियाे
मैदानमा खेलाडी बेहोस, डेनमार्क र फिनल्याण्डबीचको खेल राेकियाे
एउटा अर्को अप्ठेरो अनुभव
युरोकप :वेल्स र स्विजरल्याण्ड बराबरीमा रोकिए
पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीको वक्तब्य : राजनीतिमा बाह्य हस्तक्षेप हुन नपाओस्’
ट्रक साहित्य : जिन्दगीमा ख्यालठट्टा
गण्डकीमा मन्त्रीपरिषद् विस्तार : मनाङे विना विभागीय मन्त्री
ओ विदूषक !
मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्रले आज सानाे आकारकाे मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने, आजै शपथ ग्रहण
राज्यले नतोकेका, नचिनेका प्राज्ञ थिए मोतीलाल गुरु !
बार्सिलोनाका रोबर्टो ग्रिसमा पक्राउ
पिसिआर रिपोर्ट नेगेटिभ आए पनि लक्षण देखिए ‘लङ कोभिड’ हुन सक्छ
पानामाको रेकर्ड : अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा सर्वाधिक ठूलो जित
मुख्य पृष्ठसमाचारअदालतअगाडि सिद्धबाबा पक्ष र महिला पक्षद्वारा नाराबाजी (तस्बिरहरू)
शुक्रबार, ११ पुस, २०७६ 0प्रतिक्रिया
इनरुवा, ११ पुस । जिल्ला अदालत सुनसरीअगाडि बलात्कार आरोप लागेका सिद्धबाबा भनिने कृष्णदास गिरीका पक्ष र महिला पक्षले नाराबाजी गरेका छन् । सिद्धबाबाविरुद्ध मुद्दा अदालतमा पेस भएपछि शुक्रबार अदालत पुर्‍याइएका सिद्धबाबाको पक्षमा र सिद्धबाबाबाट बलात्कृत भनिएकी महिलाका पक्षले नाराबाजी गरेका हुन् ।
महिलाका पक्षमा महिला अधिकारकर्मीले नाराबाजी गरिरहेका छन् । बलात्कारी कृष्णदासलाई कारबाही र पीडितलाई न्यायको माग गर्दै महिला अधिकारकर्मीहरूले मौन धर्नासमेत सुरु गरेका छन् ।
यता, सिद्धबाबाका पक्षमा पनि नाराबाजी भइरहेको छ । ‘जगतगुरु रामानन्दाचार्य स्वामी रामकृष्णाचार्य महोयोगी, सिद्धबाबाको जय’ लेखिएको फ्लेक्स बोकेर सिद्धबाबाको पक्षमा नाराबाजी भइरहेको छ ।
१६ मंसिरमा पक्राउ परेका गिरीविरुद्ध बिहीबार जिल्ला अदालत सुनसरीमा जबर्जस्तीकरणी मुद्दा पेस भएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका डिएसपी विनोद शर्माका अनुसार बिहीबार सरकारी वकिलको कार्यालयले दर्ता गराएको मुद्दामा दस वर्ष कैद सजायको माग दाबी गरिएको छ । आजबाट थुनछेक बहस सुरु भएको छ ।
४ कात्तिक २०७६ मा बलात्कार गरेको भन्दै उनकै अनुयायी महिलाले कृष्णदासविरुद्ध प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिएपछि सुनसरी प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो । बलात्कारको आरोप लागेपछि विराटनगरको मुनालपथस्थित विराटनर्सिङ होममा भर्ना भएका कृष्णदासलाई १६ मंसिरमा पक्राउ गरी ४ दिनको म्याद थप भएको थियो ।
२० मंसिरमा दोस्रो पटक ५ दिनको, २७ मंसिर तेस्रो पटक ७ दिनको, ३० मंसिरमा चौथो पटक ७ दिनको र ७ पुसमा पाँचौ पटक ३ दिनका लागि हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न म्याद थप गराएको थियो ।
गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कृष्णचन्द्र नियुक्त
कोरोना अपडेट : तीन हजार थपिए सङ्क्रमित, ६ हजार सङ्क्रमण मुक्त